Netflix, အမေဇုံနှင့်အခြား streaming များန်ဆောင်မှုအနေဖြင့် 15 rated ရှိုးပွဲကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ယခုအပတ် - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » Entertainment Netflix, အမေဇုံနှင့်အခြား streaming များန်ဆောင်မှုအနေဖြင့် "15 rated ရှိုးပွဲကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ယခုအပတ် - BGR
Netflix, အမေဇုံနှင့်အခြား streaming များန်ဆောင်မှုအနေဖြင့် 15 rated ရှိုးပွဲကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ယခုအပတ် - BGR
ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်တစ်ဦးလမ်းပြလျှင်, အမေဇုန်ဟာ sumptuous နှင့် evocative အစုံအဘို့အခက်ခဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပြီးဒါဟာသူ့ရဲ့သစ်ကိုစီးရီး၏စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကတည်ဆောက်ရန်ပြင်ဆင် ပွဲတော်ကြီး Row - အရာကြည့်ရှုသူမှော်သတ္တဝါများ, ဗစ်တိုးရီးယားခေတ်တစ်စိတ်ကူးယဉ်မြို့နှင့်ဒီထက်ရှုပ်ထွေးနေသောများအတွက်သမိုင်းတွေ့ရမယ်။ အဆိုပါဇာတ်လမ်းကိုမှော်၏အစွမ်းထက်ရောစပ်ပါရှိသည်, ရာဇဝတ်မှုများဖြေရှင်း, မူဝါဒ, ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ၏ကုသမှုနှင့် Fairy နှင့်လူသားအကြားတစ်ဦးမရေရာသောချိန်ခွင်လျှာ, သင်နောက်ဆုံးတော့တစ်ပန်ကာသို့မဟုတ်မဖြစ်ကြစီးရီးရှိသည်ဖို့ပုံရသည် အနည်းဆုံးမက်ထရစ်အပေါ်အခြေခံပြီး, အမေဇုန်၏ရည်ရွယ်ချက်ဝတ်ပြုကြ၏။
ကြည့်ရှုပြီးခဲ့သည့်အပတ်အတွင်းအဆက်မပြတ်အဓိကဖြန့်ဖြူး platform များမှတဆင့်အများဆုံးမကြာခဏစောင့်ကြည့်သောအရာကိုအပေါ်နယူးဒေတာ ပွဲတော်ကြီး Row အမေဇုံစာရင်းတွင်ထိပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာစဉ်ဆက်မပြတ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကနေဒေတာတွေကိုအပေါ်အခြေခံသည် Reelgood အဆိုပါ 15 နှင့်3စက်တင်ဘာလအကြား၎င်း၏ကြည့်ရှုသူများအတွက်5rated ရှိုးများစာရင်းကိုမျှဝေသူကို BGR ။ တူသောစီးရီးအပါအဝင်သင်စိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်အဖြစ် Netflix ၏ဘဏ်ဍာသည်, ထိပ်တန်း5အတွက် posts များစာရင်းကိုစိုးမိုး, 13 အကြောင်းရင်းအဘယ်ကြောင့် et Mindhunter - ဟုပြောဆိုသကဲ့သို့, ယခုအပတ်ဖြစ်သော, အမှတ် 1 ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ ပွဲတော်ကြီး Row .
အဘယ်သူမျှမအံ့သြစရာ, အမေဇုံပြီးသားဒုတိယရာသီအတွက်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ နေရာအများစု, စီးရီး - တစ်ပါတ်နဲ့တစ်နှစ်ခွဲအစောပိုင်းကအမေဇုံအပေါ်စတင်ခဲ့သည့် - များလွန်းအတိတ်စီမံကိန်းများကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ကြောင်းကိုလည်းပြီးသားထုတ်လုပ်ပြီးမီဒီယာလွှမ်းခြုံနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလုံလောက်အောင်ဘက်ဇ်တက် streamer ယခု။ ] ထိုအတောအတွင်းဒီမှာ Reelgood ကြည့်ရှုသူအနေဖြင့်ဒေတာများပေါ်တွင် အခြေခံ. အားလုံးန်ဆောင်မှုများအကြား 15 rated ပြပွဲများ၏စာရင်း၏ကျန်တစ်ဦး preview ကို, ဖွင့်:
13 အကြောင်းရင်းများ  Mindhunter
The Dark Crystal: အသက်အရွယ်ခုခံ
le 100 Centenary နေရာကောင်း
Millie Bobby ဘရောင်း, ရုပ်ရှင် '' Stranger အရာ ', Netflix အသစ်တစ်ခုစီမံကိန်းအတွက်ပြင်ဆင်နေ၏ကြယ်ပွင့် - BGR